အဘယ်သူမျှမကြည့်သောအခါမိန်းကလေးများသည်အလွန်စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောအမှုများဖြစ်သည် - သတင်း
ဒါဟာသူတို့တစ် ဦး တည်းမကြာခဏသူတို့မဟုတ်သောအခါမကြာခဏစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောအမှုတို့ကိုပြုကြောင်းဘုံအသိပညာပါပဲ။ ဒါဟာလူတစ် ဦး ၏ဝိသေသလက္ခဏာ၏အစိတ်အပိုင်းစုစုပေါင်းဖြစ်ခြင်းနှင့်ဤ grossness အတွက် reveling ကြောင်းရုံတစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာလက်ခံခဲ့သည်ရဲ့။ အမျိုးသားများက၎င်းသည်၎င်းအားအမျိုးသားများဖြစ်စေသောအရာဟုထင်ပြီးပိုမိုအရေးကြီးသည်မှာကမ္ဘာပေါ်ရှိအနံ့ဆိုး။ ဆံပင်မရှိသောအမျိုးသမီးများနှင့်ခွဲခြားထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကဒါမှားပါပဲ။
ကျွန်ုပ်သည်ဘ ၀ တစ်ခုလုံးတွင်မိန်းကလေးကျောင်းများသို့သွားပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏ဘ ၀ အများစုနီးကပ်သည့်အမျိုးသမီးအုပ်စုတစ်စု၏ဝိုင်းရံထားသည့်အမျိုးသမီးတစ် ဦး အနေဖြင့်အမျိုးသမီးများသည်စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသောသတ္တဝါများဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်သည်။ အစ်ကိုအကြီးနှင့်ကြီးပြင်းလာသည့်အမျိုးသမီးတစ် ဦး အနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယောက်ျားလေးများထက် ပို၍ ပင်မကြာခဏပင်ကြုံတွေ့ရတတ်သည်။
ကာလ - လက်ချောင်းစစ်ဆေးမှုများ
သင်အများပြည်သူရောက်နေချိန်တွင်လက်ချောင်းများကိုစစ်ဆေးခြင်းသည်အလွန်လွယ်ကူပြီးရုတ်တရက်သင်သံသယဖြစ်ဖွယ်ပစ္စည်းများထွက်လာသည်ဟုခံစားရသည်။ သငျသညျတိတ်ဆိတ်တဲ့ထောင့်ကိုရှာပါကသွေးလား၊ ဥမင်လားဆိုတာကိုစမ်းကြည့်ပါ။ အကယ်၍ ၎င်းသည်ရိနာစွဲလျှင်သင်၏လက်ကိုဆေးကြောပါသို့မဟုတ်တစ်ရှူးပေါ်တွင်သုတ်။ ဆက်ပါလိမ့်မည်။
သူတို့လတ်ဆတ်နေလျှင်စမ်းသပ်ဖို့အတွင်းခံအဝတ်အစားများနှင့်အဝတ်များ၏ crotch ကို sniffing
သင်၏ဂျင်းဘောင်းဘီသည်တစ်နေကုန် ၀ တ်ဆင်ထားပြီးနောက်လတ်ဆတ်သောပုံဖြစ်သော်လည်း crotch သည်လတ်ဆတ်သောအနံ့မရှိသောကြောင့်၎င်းသည်အရေးကြီးသည်။
သူတို့ကတစ်ခါတစ်ရံနည်းနည်းအနံ့ဆိုးရသော်လည်းအားလုံးအားလုံးအတွက်, ကသင်၏အချိန်ဖြုန်းတီးပါတယ်။ ပို၍ ၀ တ်စားဆင်ယင်နိုင်သောဘေ့စ်များသည်နူးညံ့သိမ်မွေ့။ သက်သောင့်သက်သာရှိသည်။ သူတို့ကိုကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုနဲ့လေပေါ်မှာတင်၊ ၂၄ နာရီလုံးလုံးသင့်ဗီရိုအပေါ်မှာချထားပါ၊ မင်းသွားချင်တယ်
ဒါဟာအမြဲနည်းနည်း cheesy အနံ့။ သငျသညျချက်ချင်းအလွန်သင့်ကိုယ်ပိုင် Earlobe အားဖြင့်ထွက်စုဆောင်းပြီးနှင့် rancid ဘက်တီးရီးယားကြောင့်အနံ့ဖြစ်စေသောအရာကိုတွေးမိပေမယ့်သင်ကကူညီပေမယ့်တစ် ဦး sniff ရှိသည်။
kourtney Kardashian 2019 အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဖြစ်ပါတယ်
ကျောင်းတွင်သင်၏အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်အတူ queef ပြိုင်ပွဲရှိခြင်း
စုစုပေါင်းဒါပေမယ့်လည်း fuck ဆိုတဲ့ဖျော်ဖြေမှု။ သင်၏လိင်အင်္ဂါမှလေကိုထုတ်ယူနိုင်သည်ကိုသင်သတိပြုမိသောနေ့သည်အလွန်ကြီးကျယ်ပြီးသင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်လည်းဝေမျှချင်သည်။
မိန်းကလေးများသည်ယောက်ျားများထက်လက်သည်းများပိုရှည်တတ်သည်။ သူတို့ကပိုကောင်းတဲ့ပုံပဲ။ တစ်မိနစ်မှာသူတို့စင်ကြယ်နေပြီ၊ နောက်တော့သင်တီကောင်များကိုရှာနေပုံရသည်။ သင်ခဏတာမှထွက်လာတာကိုတွေ့ရပေမယ့်သူတို့ကိုသင်ရှင်းပစ်ရန်စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်။
ဒါကပျော်စရာအတွက်ဒါဟာဆံပင်ဖယ်ရှားရေး၏ပုံစံမဟုတ်ပါဘူး။ ပိုက်တစ်စင်းဆွဲထုတ်ခြင်းသည်နာကျင်မှုဖြစ်သော်လည်းအမြစ်သည်မည်မျှနက်ရှိုင်းသည်ကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်ကျေနပ်စရာကောင်းသည်။ သင်လည်းထိုနာကျင်မှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိရန်မိမိကိုယ်ကိုအလွန်ဂုဏ်ယူကြောင်းချက်ချင်းခံစားမိသည်။
သင်နှစ်ထပ်တိုင်ကိုမြင်သောအခါ ပို၍ ပင်ပျော်စရာကောင်းသည်
မယုံနိုင်စရာ! သင်မြင်နေရသည့်အရာများကိုအံ့အားသင့်စေပြီး၎င်းကိုခဏစောင့်ကြည့်။ မရနိုင်ပါ။ ထိုအခါသင်သည်ထိုသူတို့အားနှစ် ဦး စလုံးတစ်ချိန်တည်းမှာဆွဲထုတ်။
ထိုအခါသင်တစ် ဦး ingrown pube ကိုရှာဖွေနှင့်ထုတ်ယူသောအခါအလွန်စိတ်ကျေနပ်မှုခံစား
သင်၏လိင်အင်္ဂါခတ်တစ်ခုပေါ်တွင်နာကျင်ကိုက်ခဲသောအဖုတစ်ခုကိုသင်သတိပြုမိသည်။ သင်ပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်ပြီး၎င်းသည်ဆံပင်၏အမြစ်တွယ်နေသောဆံပင်ဖြစ်သည်။ ပိုသေးတာကမင်းမှာ pop လိုသေးတဲ့သေးငယ်တဲ့အစက်ရှိရင်။ သင်ကိုယ်တိုင်သက်သောင့်သက်သာရှိစေပြီး၊ ဖိညှပ်နှင့်ဝါဂွမ်းပူသောနေရာ၌ထားပါ။
ပျော်စရာကအဲဒီမှာအဆုံးသတ်မထားဘူး၊ မင်းကဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးအဲဒါဟာရှည်လျားလွန်းတယ်ဆိုတာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးလအနည်းငယ်အတွင်းကြီးထွားလာနေတယ်။ ဒါ့အပြင်သူကထွက်ပြီးနောက်ချက်ချင်းကယ်ဆယ်ရေး - အမြဲတမ်းအောင်မြင်မှုတစ်နည်းနည်းနဲ့တူခံစားရ၏။
ဒီဟာကသင့်အသားအရေအတွက်အရမ်းကိုဆိုးဝါးလွန်းတယ်။ သို့သျောလညျး, ဘိုးဘေးကျွန်တော်တို့ကိုမိတ်ကပ်ဝတ်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်ကဲ့သို့ငါတို့ခံစားရစေတော်မူပြီနှင့်အစဉ်မပြတ်ငါ 30 မိနစ်ဖယ်ရှားရေးများအတွက်အချိန်ရှိသည်နှင့်ပြန်လည်လျှောက်ထား - ဤကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
ကာလ - စွန်းအတွင်းခံအဝတ်အစားဝတ်ဆင်
ကျွန်ုပ်တို့သည်လစဉ်လတိုင်းဘောင်းဘီတစ်ထည်ကိုစွန်းထင်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကာလ app နှင့်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သလောက်စီစဉ်နိုင်သော်လည်းအမြဲတမ်းအံ့အားသင့်စေပါသည်။
သူတို့ကိုစွန့်ပစ်ရန်မလိုအပ်ပါ - ဘောင်းဘီများသည်စျေးကြီးပြီးနောက်လတွင်ထပ်မံဖြစ်ပွားလိမ့်မည်။ အဲဒီအစားကျွန်ုပ်တို့ခံနိုင်ရည်ရှိခဲ့သောအတိတ်ကာလကိုသတိရစေသည့်အညိုရောင်အစွန်းအထင်းများဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားပါသည်။
သူတို့ဒါမသက်မသာနေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပရိယာယ်အများပြည်သူအတွက် '' fredgie '' ကောက်ဖို့ရှိခြင်း
အထူးသဖြင့်သင်ကဇာကြိုးတစ်ချောင်းတပ်ဆင်ထားတယ်ဆိုရင်ရှေ့မျက်နှာစာကသပ်ရပ်လှပတဲ့ဝတ်ရုံတွေ (fredgies) တွေကမခံမရပ်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်သွားတယ်။ အရာအားလုံးကမှားယွင်းတဲ့နေရာတွေမှာပွတ်တိုက်ပြီးနာကျင်နေတယ်။ သူမကကြိုးစားပြီးဖယ်ရှားပစ်ရန်နက်ရှိုင်းစွာ delving လျှင်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုမစီရင်ပါနှင့် - သင်ဘယ်တော့မှနားမလည်ပါလိမ့်မယ်။
တခါတရံသင်ဟာအလျင်စလိုရောက်နေတတ်သည်၊ တစ်ခါတစ်ရံသင်မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်သည်မိုးရေလောင်းပြီးသင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်သည်ဟုသင်ထင်သည်။ ဖြစ်ပျက်နိုင်ပိုဆိုးဘာလဲ? ။
ပုံမှန်အားဖြင့်ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်တို့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီးသောအခါသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး တည်းအအေးခံခြင်းနှင့်စပ်စုနေသည်ဟုခံစားရပြီးနောက်မှဖြစ်လေ့ရှိသည်။ အထူးသဖြင့်ရေချိုးပြီးသည့်နောက်အနံ့နှင့်တစ်ရက်တာရှည်ပြီးနောက်အနံ့နှင့်နှိုင်းယှဉ်ရန်အထူးပျော်စရာဖြစ်သည်။
ဒီအများအားဖြင့်အနံ့ပြီးနောက်ဖြောင့်လာပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်အရသာရှိတဲ့အရာကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာပဲ။ ဤအရာသည်ယောက်ျားလေးများသည်သူတို့တစ်ခါမျှမလုပ်ဖူးသော်လည်းအလွန်မိန်းမောသောမိန်းကလေးများဖြစ်သည်။
ဤသည်ရုံညဥ့်မတိုင်မီနေရာလေးကိုအတွက်လာပါတယ်။ သငျသညျအလုအယက်နေနှင့်သင်သည်ထိုနံနက်ရေချိုးခဲ့ဒါကြောင့်ဒုတိယတစ်ခုမလိုအပ်သောပုံရသည်။ စိုစွတ်သောအနားကွပ်သို့မဟုတ်ကလေးငယ်ကိုသုတ်ပါ။ သင်၏ဘ ၀ ၏အလွယ်ဆုံးသောရေ - အရေးကြီးသောအပိုင်းအစများ၊ ရေမွှေးရေမွှေးနှင့်ရေမွှေးများသုတ်ရန်။
မင်းကအထူးသဖြင့်အမွေးထူနေရင်မင်းတို့ခြေထောက်ဆံပင်တွေကိုထိုးတာကသူတို့က fluffy ဖြစ်နေလို့လေ
သင့်မိတ်ကပ်ကိုချွတ်မည့်အစားသင်၏ mascara ကိုရွေးခြင်း
သငျသညျအရက်မူးနေနှင့်တီဗီကြည့်အိပ်ရာပေါ်မှာထိုင်, သင်၏မိတ်ကပ် wipe များအခန်းကိုဖြတ်ပြီးဖြစ်ကြသည်, သင်၏ mascara စုစည်းစတင်ခဲ့သည် - တစ် ဦး တည်းသာရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်ပြီးအချိန်ကာလ၏ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းလတ်ဆတ်သောကမ္ဘာကိုအရူးလုပ်ရန်မိန်းကလေးများအသုံးပြုသောနောက်ထပ်မြန်ဆန်သော hack တစ်ခု။ ငါတို့ဆံပင်၏နောက်ကျောမှာအနံ့ဆိုး။ ချောကျိကျိရှုပ်နေကြောင်းလူတိုင်းမသိကြပါ။
မင်းရဲ့ဘောင်းဘီထဲကိုလက်တွေချပြီးနွေးထွေးစေလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကို cupping လုပ်နေတယ် !!
ယောက်ျားများသည်အဆက်မပြတ်ထိုသို့ပြုသည်ကိုလူတိုင်းသိသည်။ သို့သော်မိန်းကလေးများလည်းပြုကြ, ငါတို့လိုက်တယ်င်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့ကလူများ၏ရှေ့မှောက်၌ထိုသို့မလုပ်ကြပါဘူး။
အကြံပြုသည်မဟုတ် - သူတို့သည် tampon ရှည်လျားစွာစွန့်ခွာ။ ထွက်ပေါ်လာသည့်ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်များစွာရှိသည်။ သို့သော်၊ အချိန်ခြေရာခံကိုမေ့ပျောက်ရန်သို့မဟုတ်ပျောက်ရန်လွယ်ကူပြီးသင်လုပ်သည့်အခါဆိုးသည်။
ရေချိုးခန်းထဲမှာဝီရိယစိုက်ထုတ်ခြင်းဟာမြန်ဆန်ပြီးရေကိုသက်သာစေသည် - သင်ရေဆေးတော့မည်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်လုံးဝစုစုပေါင်းမဟုတ်ပါ။ အဆိုပါရေချိုးတော်တော်လေးကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်ပေမယ်သင်ရေ၌နှစ်မြှုပ်သောအခါသင်ရေ၌နှစ်မြှုပ်ခြင်းနှင့်သူသည်သင်စိုစွတ်သောအခါအထွက်နှင့်အိမ်တွင်ထိုင်ဖို့လိုလားသူတစ် ဦး Wee ကိုင်ထားနိုင်မယ့်ကွဲပြားခြားနားသောဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါသည်။
ငါ feromones ပေါ်မှာဤအပြစ်တင် - ဒါဟာတကယ်တော့ဒါဟာသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် BO အကြောင်းကိုတစ်ခုခုကောင်းတဲ့အနံ့။
သင်၏ဆံပင်ကိုလျှော်။ ဆံပင်ကိုသင်၏ Bum အက်ကြောင်းနှင့်လိင်အင်္ဂါအကြားမှဆွဲထုတ်ပါ
ဒါကကျေနပ်စရာကောင်းပါတယ် ဒါ့အပြင်တစ်ရက်ကိုမေ့ပြီးတစ်ဝက်လောက်မှာသင်ခံစားမိပြီးဆွဲထုတ်လိုက်ပါ။ စင်ကြယ်သောချမ်းသာ
သင်၏ဆံပင်ကိုရေချိုးခန်းအတွင်းဖြတ်ပြီးဆံပင်ကိုအတူတကွထိန်း ထား၍ အခန်းတစ်ခန်းလုံးသို့ပစ်လိုက်သည်
ဆံပင်များများများပြားစွာထွက်လာပြီး၎င်းကိုပိတ်ဆို့လိုက်သောကြောင့်၎င်းကိုမပိတ်ချင်ပါ။ အဲဒီအစား, သင်အားလုံးအတူတကွစုဆောင်းပါ, သင့်လက်ချောင်းပတ်ပတ်လည်ခြုံနှင့်အခန်းတစ်လျှောက်လုံးက lobob - အုပ်ကြွပ်ကပ်ကပ်ပါကဆုကြေးငွေဖျော်ဖြေရေး။
သင့်ရဲ့ Boob ကိုင်ပြီးနှစ်သိမ့်မှုအတွက်သူတို့နှင့်အတူကစားခြင်း
ဒါကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် ပိုမိုရှုပ်ထွေးလာသည်နှင့်အမျှသင်၏နို့သီးခေါင်းသည်အဆင့်အမျိုးမျိုးကိုမြင်တွေ့နိုင်သည်။ အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုမှာသင်၏နို့သီးခေါင်းကိုစိုစေပြီးမှုတ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ အနည်းဆုံး ၅ မိနစ်ပျော်စရာ။
•တတိယနှစ်တွင်မိန်းကလေးများအားလုံးအိမ်၌သင်ကြားရသောအရာ ၃၆ ခု